Westminster Abbey - Deutsch - Izinhlelo ze-Android ku-Google Play
Humushela incazelo ku-isiZulu usebenzisa i-Google Translate? Humushela incazelo emuva ku-isi-German
Woza nathi. Uhambo ngokusemthethweni Interiors of the mlando, Westminster Abbey engu-700 ubudala Umbhalo wesiNgisi ukhuluma ngawe, lo umlingisi kanye Oscar Award winner Jeremy wakwa, kodwa lokusebenza itholakala nangezinye izilimi eziyishumi.
AmaKhosi, queens, ababusi amasosha, izimbongi, abapristi, amaqhawe kanye villains - the Abbey ngumlando ephilayo arsenal waseBrithani lapho yonke imikhondo iholele. Njalo ngonyaka abantu abangaphezu kwesigidi, i-Westminster Abbey ukuhlola lokhu wokwakha omangalisayo, oneminyaka 700 ubudala. Izinkulungwane more iqhaza ngamasevisi zethu zansuku zonke. I Abbey itholakala enhliziyweni London.
Ngaphakathi the Abbey, ungase futhi ujoyine omunye tours adume kakhulu eyayinikelwa sextons.
Isicelo sokuqala Android evumela ukuthi wena ukuba baphile ukuze isigqi izindela!
28.000 Incwadi imisebenzi, izinkambo & amathikithi ezinkulu Luhambo - emhlabeni wonke.
Umhlahlandlela wakho ngaphandle! Ukucinga 50,000+ emizileni w / amabalazwe, izithombe kanye nokubuyekeza.
Izinqaba of Poland: Umhlahlandlela travel, imephu, izindawo ezithakazelisayo: Wawel, Moszna, Malbork
Izinqaba Ukraine: Umhlahlandlela travel ezindaweni ezithakazelisayo kakhulu, imizila kanye namabalazwe
Izinqaba of Hungary: ikhambo ukuqondisa izindawo ezithakazelisayo eziningi, imizila kanye namabalazwe
Isicelo kwenza ujabulele tour of enqabeni ngolimi lwakho!
Umhlahlandlela Wakho professional for embukisweni "Da Vinci -. the Genius embukisweni"
Young Marine isiqondiso ekuphileni
The best Umhlahlandlela, amathiphu namasu YouTube!
Umhlahlandlela engcono futhi aphambe Super mario
Izinqaba Slovakia: ikhambo ukuqondisa izindawo ezithakazelisayo eziningi, imizila kanye namabalazwe
Vumela Westminster Chime ka uBig Ben okusiza ukukugcina ku-schedule.
Cardiff Castle - self waqondisa tour official